သင်၏လုပ်ကွက်ကိုစည်းရုံးပါ။ • DutchtownSTL.org •ဒတ်ခ်ျတောင်း၊ စိန့်လူးဝစ္စ၊ MO
နေခြည်, Dutchtown ပင်မလမ်းများ, Dutchtown တောင်အဝန်းကော်ပိုရေးရှင်း, ပြီးနောက် Dutchtown ရပ်ရွာတိုးတက်မှုခရိုင် ပိုမိုအားကောင်းသည့်လုပ်ကွက်များနှင့်ပိုမိုအားကောင်းသည့် Dutchtown များကိုစုစည်းရန်ကူညီခြင်းဖြင့်ပူးပေါင်းကြသည်။
တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အကျွမ်းတ ၀ င်ရှိသောအိမ်နီးချင်းများသည်ခိုင်မာသောအသိုင်းအဝိုင်း၏ကျောရိုးဖြစ်သည်။ စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားသောပိတ်ပင်တားဆီးမှုသည်မည်မျှပင်တရား ၀ င်သို့မဟုတ်အလွတ်သဘောဖွဲ့စည်းထားသည်ဖြစ်စေလုံခြုံမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ဗေဒကိုတိုးတက်စေခြင်း၊ အိမ်နီးချင်းအသစ်များကိုဆွဲဆောင်ခြင်း၊
လုပ်ကွက်များကိုအရင်းအမြစ်များနှင့်ချိတ်ဆက်လိုသည်၊ သို့မှသာ၎င်းတို့သည်စနစ်တကျနေထိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့ပိတ်ပင်တားဆီးမှုသွားရရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်သုံးဆင့်ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ် ၄၄၀၀ ရှိအိမ်နီးချင်းများသည်စည်းရုံးရေးကိုဆွေးနွေးကြသည်။
ထွက်ရောက်ရှိ! သင်၏ပိတ်ပင်တားဆီးမှုသို့ချိတ်ဆက်မှုနှင့်အရင်းအမြစ်များပိုမိုယူဆောင်လာရန်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုစည်းရုံးရေးကိုသူတို့စိတ်ဝင်စားပါကသင့်အိမ်နီးချင်းကိုမေးမြန်းပါ။ အကယ်၍ ထိုအိမ်နီးချင်းသည်အလုပ်များနေလျှင်၊ ပုံမှန်ဆက်သွယ်မှုပြုရန်ဆန္ဒရှိသည့်အဓိကအဖွဲ့တစ်ခုရရှိသည်အထိ၊ နောက်အိမ်နီးချင်းနှင့်နောက်အိမ်နီးချင်းကိုမေးပါ။
သငျသညျကိုစတင်လိမ့်မည်ဟုသူတို့အားအစောပိုင်း interaction ကလွယ်ကူချောမွေ့ကူညီပေးပါစို့။ သင်၏ပိတ်ပင်တားဆီးမှုသည်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောပြissueနာကိုစုစည်းပြီးတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုပိုကောင်းအောင်သိလိုလျှင်လူများကိုအတူတကွပေါင်းစည်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
ပိတ်ပင်တားဆီးမှုတိုင်းအတွက်ဆက်သွယ်မှုကွဲပြားလိမ့်မည် Dutchtown ရှိအချို့သောလုပ်ကွက်များသည် GroupMe၊ အခြားစာများ၊ အီးမေးလ်စာရင်းများနှင့်အခြား Facebook အုပ်စုများစသည့် messaging app များကိုအသုံးပြုသည်။
သင်၏ပိတ်ပင်တားဆီးမှုရှိအိမ်နီးချင်းများနှင့်သတင်းများ၊ အဖြစ်အပျက်များနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုမျှဝေရန်ကူညီရန် DutchtownSTL.org တွင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုရယူပါ။ ၄၂၀၀ Louisiana မှဥပမာကိုကြည့်ပါ or ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ထူထောင်ရန်
ထို့အပြင် DutchtownSTL သည်သင်နှင့်သင်၏အိမ်နီးချင်းများအတွက်အရင်းအမြစ်များကိုစုစည်းရန်၊ သတင်းဝေမျှရန်၊ အစည်းအဝေးချိန်ညှိရန်နှင့်အခြားအရာများအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖန်တီးနိုင်သည်။ ငါတို့တည်ဆောက်ထားတာတွေကိုကြည့်ပါ ဦး Louisiana ၏ 4200 ပိတ်ပင်တားဆီးမှု.
သင်၏ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက်ထိရောက်သောဆက်သွယ်ရေးနည်းစနစ်များကိုရှာဖွေရန်နှင့်တည်ဆောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည်။ ဆက်သွယ်ရေးသည်စနစ်တကျလုပ်ကွက်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ မတူညီသောလုပ်ကွက်များ၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးရှိသည်။ သတိရ, လေးစားမှုဖြစ်ခြင်းဂိမ်းရဲ့အမည်ဖြစ်တယ်, ကြှနျုပျတို့လညျးထိုအပျေါမှာအချို့သောထောက်ပြရရှိပါသည်။
Plug In လုပ်ပါ
Dutchtown တွင် ဒေသအလိုက်ရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်များစွာရှိသည်။ Dutchtown Main Streets ပွဲအကြောင်း လူတိုင်းကို ကြိုပြောထားသလား Marquette ပန်းခြံမြို့တော်တိုးတက်မှုအတွက် Dutchtown CID သို့သွားခြင်း၊ သို့မဟုတ် Dutchtown South Community Corporation's သို့ဝင်ရောက်ခြင်း ရပ်ရွာအာဏာရှိရေးကော်မတီ သင်၏ပိတ်ပင်တားဆီးမှုသို့အရင်းအမြစ်များကိုရရှိရန် Dutchtown တွင်အုပ်စုတစ်ခုသည်သင်၏ block ၏ဘုံရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ရှိရန်လုပ်ဆောင်နေသည်။
Find အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အရင်းအမြစ်များ ဒါကသင့်ကိုပိုကောင်းတဲ့အုတ်တံတိုင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ကူညီနိုင်လိမ့်မယ်။
Dutchtown ၏အဖွဲ့အစည်းများသည်သင့်အားလူများ၊ မြို့ဌာနများ၊ ဆလပ်, စိန့်လူးဝစ် Brightside, အ မြို့ပြလိဂ်၏ Block Units ၏အဖွဲ့ချုပ်, STL အပြန်အလှန်ကူညီမှုသင်၏အိမ်နီးချင်းများကိုအတူတကွစုစည်းရန်နှင့်သင်၏ပိတ်ပင်တားဆီးမှုဆိုင်ရာပြaddressနာများကိုဖြေရှင်းရန်အခြားအဖွဲ့အစည်းများ။ DutchtownSTL သည်အမြဲတမ်းတိုးချဲ့နေသောစာကြည့်တိုက်ကိုလည်းပေးထားသည် အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များကို။ အရာရာကိုပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်မြို့၏လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလမ်းညွှန်ရန်သင်ယူခြင်းသည်ခက်ခဲနိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီရန်ဤနေရာ၌ရှိသည်။
အဆင်ပြေပါတယ်! ပိုကောင်းတဲ့ Dutchtown အတွက်အလုပ်လုပ်နေကြသောအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူများနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်အချိန်ပိုယူချင်သည်။ သင်စဉ်းစားနိုင်သည် လုပ်အားပေးသည်တ ဦး တည်းပူးပေါင်း Dutchtown ကော်မတီများတစ် ဦး မှလာမယ့် ရပ်ကွက်အစည်းအဝေး, ဒါမှမဟုတ်အကြောင်းကိုမဆိုအကြောင်းကိုအဘို့အကျဆင်းနေ ရပ်ကွက်အတွင်းဖြစ်ရပ်.
ပိတ်ပင်တားဆီးမှုစည်းရုံးရေးသည်သင့်အတွက်မှန်ကန်မှုရှိမရှိမသေချာပါကလွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည် ငါတို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ ငါတို့သည်သင်ပိုမိုအားကောင်း Dutchtown သို့ fit ဘယ်လိုပုံကိုဆွေးနွေးနိုင်!
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးပါ။ ASAP ကိုစတင်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည်။
အခြားအိမ်နီးချင်းများနှင့်သင်အလုပ်လုပ်နေပြီလား။ Yes အဘယ်သူမျှမ
သင်၏အိမ်နီးချင်းများနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်မည့်နည်းလမ်းရှိပါသလား။ Yes အဘယ်သူမျှမ ဆိုလိုသည်မှာဖုန်းနံပါတ်များ၊ အီးမေးလ်လိပ်စာများသို့မဟုတ်ပုံမှန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်သွယ်မှု
ဖော်ရွေမှုအတွက်ပဲ လုံခြုံရေးပြissuesနာများ (ရာဇ ၀ တ်မှု၊ ယာဉ်ကြောစသည်) အလှအပဆိုင်ရာပြissuesနာများ (သန့်ရှင်းရေး၊ ဥယျာဉ်စသည်တို့) အခြားကိစ္စရပ်များ (စွန့်ပစ်ခြင်း၊ လစ်လပ်နေသောအဆောက်အ ဦး များစသဖြင့်) လျှောက်ထားသမျှကိုစစ်ဆေးပါ။
ဒီစာမျက်နှာကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဤစာမျက်နှာကိုနောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံခဲ့သည် နိုဝင်ဘာလ 13th, 2021 .